नेपाल आयल निगमले सोमबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल हरेकमा १० रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ- सरकारले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बृद्धि गरेको छ। वाणिज्य सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय नेतृत्वको आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा हरेकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। बढेको मूल्यअनुसार अब पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १७० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ प्रतिलिटर भएको छ। […]
Desh Sanchar4दिन पहिले
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, डिजेल र पेट्रोलको मूल्य हालसम्म कै उच्च विन्दुमा
Bizpati पौष २०७८
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ३ रुपैयाँ मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले बुधबार रातिबाट लागूहुनेगरी पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा ३ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको हो । निगमले बढाएको मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै डिजेल १२२ र मट्टितेल १२२ रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढाएको छ […]
Nepal Press पौष २०७८
पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अब कुनको कति पर्छ ?
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले आज माघ ५ गते रातीदेखि लागु हुने गरि डिजेल, पेट्रोल , मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो ।जस अनुसार निगमले पेट्रोल र डिजेल/मट्टितेलको साबिकको बिक्रि मूल्यमा रु. ३।०० ले वृद्धि गरी काठमाडौं (निगमको डिपो क्षेत्रको १५ कि.मि. परिसर भित्र) को लागि नयाँ खुद्रा विक्रि मूल्य क्रमशः रू. १३९।०० र रू. १२२।०० कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक हवाई ईन्धनमा साबिकको बिक्रि मूल्यमा प्रति लिटर रू. ५।०० ले वृद्धि गरी आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर रु. १०६।०० तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलो लिटर १०० अमेरिकी डलरले वृद्धि गरी ९९५ । ०० अमेरिकी डलर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । एल.पी.ग्यासको विक्री मूल्य हाललाई यथावत राखिएको छ।निगमले पछिल्लो पटक मिति २०७८।०७। २४ मा मूल्य समायोजन गरेपश्चात हालसम्म अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्चतम विन्दुमा नै रहि पुनः निरन्तर बढ्दै गई कच्चा तेलको मूल्य झण्डै USD ८५ देखि ८९ प्रति व्यारल पुगिसकेको अवस्थामा ईण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट केहि दिन अघि जनवरी १६,२०२२ मा प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा रु. १३.१८, डिजेलमा रु. ८.८१ तथा प्रति सिलिण्डर एल.पि. ग्यासमा रु. ६४६.१६ घाटा कायम भएको हुँदा निगमलाई १५ दिनमा करीब रू. २ अर्ब २४ करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको व्यहोरा निगमले यस अघि मिति २०७८।१०।०३ मा प्रेषित विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।यस मूल्य समायोजन पश्चात् पनि निगमलाई निम्न बमोजिम १५ दिनमा करीब रू.१ अर्व ८८ करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको उल्लेख गरेको छ।पेट्रोल : रू. १०.७२ घाटा प्रति लिटर (१५ दिनको घाटा करीब रू. ३४.८१ करोड)डिजेल : रू. ६.३३ घाटा प्रति लिटर (१५ दिनको घाटा करीब रू. ५७.४३ करोड) मट्टितेल : रू. २२.६४ नाफा प्रति लिटर (१५ दिनको नाफा करीब रू. २.०७ करोड) हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ): रू. ९.६२ नाफा प्रति लिटर (१५ दिनको नाफा करीब रू. २.६१ करोड) . हवाई इन्धन (बाह्यतर्फ): रू. २९.०३ नाफा प्रति लिटर (१५ दिनको नाफा करीब रू. १३.७९ करोड एल. पि. ग्यासः रू. ६४६.१६ घाटा प्रति सिलिण्डर (१५ दिनको घाटा करीब रू. ११४.८६ करोड)यस अघि : आयल निगमले भन्यो 'संचित बचत शून्यमा झर्यो, इन्धन किने वापत भारतलाई तिर्न पुग्ने रकम पनि छैन'
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्यो, पेट्रोल प्रतिलिटर १३० र ग्यास प्रतिसिलिण्डर १४ सय ५० पुग्यो
नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८
जेठ २, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आइतवार रातीदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमले पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो । मूल्य समायोजन पश्चात काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य १२३ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १०६ र आन्तरिक हवाइ इन्धनको आन्तरिक उडानाको मूल्य प्रतिलिटर ७८ कायम भएको छ । निगमले एलपी ग्यास र अन्तरराष्ट्रिय हवाइ उडानको इन्धनको मूल्य भने बढाएको छैन ।
Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८
पेट्रोलियम पदार्थको फेरि मूल्य बढ्यो
पेट्रोलियम पदार्थको फेरि मूल्यवृद्धि भएको छ। नेपाल आयल नियगले मंगलबार डिजेल, पेट्रोल तथा मट्टितेल र हवाई इन्धनमा समान २-२ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको हो।
सेतोपाटी माघ २०७७
पेट्राेल, डिजेल र मट्टितेलकाे मूल्य बढ्यो
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्राेल, डिजेल र मट्टितेलकाे मूल्य बढाएकाे छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार बिहीबार रातिदेखि लागू हुनेगरी मूल्य बढाइएकाे निगम प्रवक्ता वीरेन्द्र गाेइतले जानकारी दिए। पेट्रोलकाे मूल्य १. ५० र डिजेल / मट्टितेल – रु. १।०० प्रति लिटर बढेकाे छ। जसअनुसार पेट्रोल १११ रुपैयाँ ५० पैसा प्रत...
थाहा खबर चैत्र २०७५
इन्धनको मूल्य बढ्यो, पेट्रोल अब लिटरको १०२ रुपैयाँ
१७ पुस, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । निगम प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतका अनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर एक-एक रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ । यसैगरी खाना …
OnlineKhabar मंसिर २०७४
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए। पेट्रोलमा , डिजेल र मट्टितेलको लिटरमा १ रुपैयाँ बढाएको छ। पेट्रोल लिटरको १ सय १ , डिजेल ७८ र मट्टितेल लिटरको ७८ रुपैयाँ पर्ने छ।
Setopati मंसिर २०७४